Ahoana no fomba ahazoana 2 volana maimaim-poana amin'ny Amazon Music Unlimited | Androidsis
Francisco Ruiz | | Fampiharana Android, Mozika maimaim-poana, About us, Tutorials
Te hahazo ve ianao 2 volana maimaim-poana amin'ny Music Unlimited, Serivisy mozika mivantana any Amazon izay mahafinaritra tokoa ?.
Raha izany no izy, aza adino ny lahatsoratra manaraka, satria hanazava tsikelikely ny fomba ahazoana azy aho sy ny takiana izay tsy maintsy ataonao mba hidirana. iray amin'ireo serivisy fitaterana mozika tsara indrindra ankehitriny ary manolotra anao izao Fitsarana maimaimpoana sy tsy andoavana vola amin'ny roa volana voalohany ho an'ny mpanjifa praiminisitra.
1 Inona no atao hoe Amazon Music Unlimited?
2 Ahoana no ahazoako tombony amin'ireo 2 volana maimaim-poana amin'ny Amazon Music Unlimited?
3 Izay rehetra omen'ny drafitra fianakaviana Amazon Music Unlimited ho anay
3.1 Manaova fifanarahana Amazon Music Unlimited amin'ny fipihana eto
Inona no atao hoe Amazon Music Unlimited?
Music Unlimited avy amin'i Amazon dia Serivisy mozika mivantana an'ny Amazon izay mamela anao hanana hira mihoatra ny 50 tapitrisa eo am-pelatananao amin'ny terminal Android mifanentana aminao mba hahafahanao mihaino azy ireo na aiza na aiza misy anao na tsy misy Internet.
Serivisy mozika mivantana izay mihamitombo hatrany, miaraka amin'ireo mpampiasa vaovao miditra sy mpanakanto vaovao ary orinasan-tsoratra izay matoky ny traikefan'ny magazay an-tserasera lehibe izay mivarotra vokatra isan-karazany, teknolojia ho an'ny mpanjifa, akanjo, kilalao ary koa sakafo.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny Amazon Music Unlimited dia izany Izy io dia manana rindrambaiko manaitra ho an'ny Android izay iray amin'ireo tsara indrindra azoko andramana raha ny momba ny serivisy mozika streaming ho an'ny Android, ary afaka manome toky anao aho fa nanandrana azy rehetra aho.
Fampiharana voalamina tsara, miaraka amin'ny fanasokajiana ireo mpanakanto, rakikira, lisitra Play, radio na tolo-kevitra, izay, Ny marina dia ity sokajy fanoloran-kevitra farany ity, tsy maintsy lazaiko anao, manindrona azy ara-bakiteny io rehefa manao ny asany. izay tsy iza fa ny fanomezana toro-hevitra anao manokana mifototra amin'ny tantaran'ny mozika henonao amin'ny alàlan'ny Music Unlimited,
Ahoana no ahazoako tombony amin'ireo 2 volana maimaim-poana amin'ny Amazon Music Unlimited?
Handray soa amin'izany tolotra voafetra ihany amin'ny fisoratana anarana 4000 voalohany amin'ny serivisy Amazon Music Unlimited, tokony ho tena haingana dia haingana ianao ary manakarama ny andrana amin'ny serivisinao fipihana io rohy io ihany. Ary manasongadina ny tena haingana aho satria ankoatry ny tolotra voafetra ho an'ny fisoratana anarana 4000 voalohany natao, dia tolotra voafetra ihany koa amin'ny fotoana satria anio alina ny 22 Desambra 2017 amin'ny 00:00 ora Espaniola no hanatanterahana azy. 24 Desambra 2017 ho avy izao amin'ny 23:59 ora GMT + 1.
Ny hany fepetra takiana aminao dia ny manakarama ny drafitry ny mpianakavy ahafahanao manararaotra andian-tombony izay rehefa misoratra anarana ianao, alohan'ny faran'ny fitsapana dia afaka misoratra anarana ianao amin'ny fotoana rehetra tsy misy fanoloran-tena ary tsy ho ianao no hampandoaviny vola fa tsy euro. , (Toy ny hoe misoratra anarana amin'ny andro voalohany ianao raha vao mandray azy io dia hijanona ho mavitrika sy maimaim-poana mandritra ny roa volana ny fitsarana). Tombontsoa izay ho tanisiko eto ambany ary tsara ka hahazoanao ny fanompoana ao amin'ny fianakaviana amin'ny vidiny 2.5 Euros isaky ny olona ao amin'ny fianakaviana raha manakarama olona enina ianao.
Izay rehetra omen'ny drafitra fianakaviana Amazon Music Unlimited ho anay
ny 14.99 euro / volana, izay mitentina 2.5 euro eo anelanelan'ny olona eninaSatria ny Amazon Music Unlimited dia mamela antsika hampiditra mpampiasa, fianakaviana, namana ary olom-pantatra enina amin'ny ankapobeny amin'ny kaontinay, dia afaka mankafy ny tombony rehetra atolotry ny serivisy mozika streaming any Amazon ho anay izahay, izay tsy kely akory:
Hira 50 tapitrisa mahery tafiditra ao amin'ny katalaoginy ofisialy ary mitombo isan'andro.
Kaonty 6 an'ny tsirairay sy tsy miankina tanteraka miaraka amin'ny tolo-kevitra natokana ho azy.
Mety ho afaka misafidy ny kalitaon'ny streaming audio amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny fidirana tena tsotra sy mora avy amin'ny fikirana amin'ny rindranasa Android.
Mety hampiato ny serivisy hatramin'ny andro voalohany tsy misy fanoloran-tena ary na dia izany aza dia hajaina ny fotoam-pitsarana na ny fotoana naloanao.
Mety hananana fahefana misintona hira na rakikira feno afaka mihaino amin'ny fotoana rehetra nefa tsy misy fiatraikany amin'ny taham-bolantsika na hampihena ny fifandraisantsika amin'ny Internet.
Iray amin'ireo rindrambaiko mpilalao mozika tsara indrindra hitako ho an'ny Android, manana famatony famaranana mihitsy aza izy, zavatra izay efa notakin'i Spotify nandritra ny taona maro ary mbola tsy nampiharina tamin'ny fampiharana azy.
Taha tsy manokan'ireo mpanjifa praiminisitra 149 euro isan-taona raha mandoa indray mandeha ianao dia mahazo 2 volana !!
Manaova fifanarahana Amazon Music Unlimited amin'ny fipihana eto
Raha te hahita ny fampiharana Android ianao, Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny serivisy mozika Amazon Music Unlimited ary izay rehetra atolotray anay, dia manoro hevitra anao aho mba hijery ilay horonantsary avelako eo ambanin'ireto andalana ireto, horonantsary izay nataoko tamin'ny fotoana nanolorana ilay tolotra hanandramana maimaimpoana ny serivisy dia nomen'izy ireo 10 euro handany amin'ny Amazon.
Raha ny lojika dia efa tapitra io tolotra nolazaiko io tao amin'ilay horonan-tsary Saingy ny rafitra fandraisana mpiasa izay hazavaiko aminao amin'ny horonantsary dia mitovy tanteraka, ary koa ny fampiharana Android, izay averiko fa iray amin'ireo tsara indrindra hitako tamin'ny fampiharana mozika mivantana ho an'ny Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Fomba ahazoana 2 volana maimaim-poana amin'ny Music Unlimited, ny serivisy mozika mivantana avy any Amazon izay mahafinaritra
Efa fantatray ny pitsony feno momba ny Galaxy J2 2018